Samsung Gear S2 သည် iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် Gadget သတင်း
ပိုင်ရှင်တွေ Samsung ကဂီယာ S2 ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သညျ သင်၏စမတ်နာရီကို iPhone တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း။ ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်တွင် Verizon မှ Samsung device အတွက် update ကိုအနည်းဆုံးယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ယခုအချိန်တွင်အခြားနိုင်ငံများ၌ထိုကဲ့သို့သောသဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်စပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာသို့ရောက်ရှိရန်အချိန်များစွာမယူရဟုယူဆနိုင်သည်။ Samsung ကသတင်းကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်း၎င်းသည်မကြာမီတရားဝင်ဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်အခမဲ့စမတ်နာရီများအတွက်စမတ်နာရီကိုချိတ်ဆက်နိုင်မည့် update ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဘယ်လိုပုံမှန်လဲ iOS နှင့် Gear S2 နှင့်လိုက်ဖက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိပါ, ကမ္ဘာ့အပေါငျးတို့သနိုင်ငံများရှိ devices များမှ update ကို၏ရောက်ရှိနှင့်အတူထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည် သေချာတာကတော့ဒီပစ္စည်းဟာရောင်းအားကိုတိုးစေလိမ့်မယ်၊ gadget နှစ်ခုကြားမှာသဟဇာတမဖြစ်တာကြောင့်အိုင်ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေကိုမအောင်နိုင်သေးဘူး။
အကယ်၍ သင့်တွင် Samsung Gear S2 နှင့် iPhone တစ်ခုရှိပါကသင်ကံကောင်းပါစေ။ ပျော်ရွှင်မှုကိုအပြည့်အဝခံစားရရန်သင့်တိုင်းပြည်တွင်အသစ်တင်ခြင်းကိုတရားဝင်စတင်ရန်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရမည်။ သေချာတာပေါ့၊ စိတ်မပူပါနဲ့ Gear S2 အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ်ကိုရရှိပြီဆိုရင်ချက်ချင်းသွင်းလို့ရအောင်ကြေငြာပါလိမ့်မယ်။
Samsung Gear S2 နှင့် Apple iPhone တို့အကြားလိုက်ဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောကြေညာချက်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Samsung Gear S2 သည် iOS နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ငါမဆက်သွယ်နိုင်ဘူး ငါလုပ်နိုင်တာ
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်း။ ငါ့မှာ iPhone 6s Plus နဲ့မဖွင့်သေးတဲ့ Gear S2 ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာသင်ချိတ်ဆက်သောအခါသင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင် whatsapp အသိပေးချက်များကိုသင်ရရှိပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် iPhone နှင့်အသစ်ဝယ်ထားသောနာရီနှင့်အတူအံဆွဲထဲတွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကို Bluetooth မှတဆင့်တောင်မဖော်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီသတင်းကြောင့်ကျွန်တော် ၀ ယ်လိုက်တာ။
ကောင်းပြီ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ လိုင်းနှင့်အခြားသူများမှသတိပေးချက်များကိုမည်သို့ချိတ်ဆက်ပြီးလက်ခံရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဗီဒီယိုများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ငါရောင်းနိုင်၊ မရောင်းနိုင်လားကြည့်ရအောင်။ ဤစာမျက်နှာမှတုံ့ပြန်မှုကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်။
ဒီသတင်းဟာ Samsung ကအရောင်းပိုမိုများပြားလာရန်မှားယွင်းသောမျှော်လင့်ချက်များဖန်တီးရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟာဗျူဟာဖြစ်သည် ဒီလိုသတင်းမျိုးကိုစစ်ထုတ်ဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့လူမိုက်များက Samsung လက်ပတ်နာရီနှင့် iPhone စောင့်နေခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဘယ်သောအခါမျှလိုက်ဖက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိထားလျှင်…
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone6ထပ်တူပြုခြင်းခံရသည်။ အားနည်းချက်မှာအီးမေးလ်များ၊ WhatsApp၊ မျက်နှာ၊ တွစ်တာများကိုနာရီမှတုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် nil ။ မေးခွန်းမေးခွန်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကအကြောင်းပြောနေခြင်းလော။
Juancc ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါက၎င်း၏မူရင်းစက်ရုံအခြေအနေတွင်ထားလျှင်, အရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ကြလိမ့်မည် ???
Whatapp အတွက်သင်သည် chat hub ရှိရမည်
ဆာဗေးဒေါ Gilperez ဟုသူကပြောသည်
အဲဒီအကြောင်းသတင်းရှိပါသလား မည်သူမဆိုအိုင်ဖုန်းကိုဂီယာ s2 နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပါသလား
Salvador Gilperez အားပြန်ကြားပါ
ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်၎င်းသည် Bluetooth သို့သွားခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ခေါ်ဆိုမှုများ၊ အသိပေးချက်များစသဖြင့်လွယ်ကူသည်။
Enrique M က ဟုသူကပြောသည်
အိုင်ဖုန်းမှာအက်ပလီကေးရှင်းမရှိရင်ကော။ ငါ့မှာ iPhone6ရှိတယ်။ အရာရာတိုင်းမှာမရှိတော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါဘူး တစ်ယောက်ယောက်ကဒီဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြလို့ရမလား။
Enrique M ကိုပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ မွမ်းမံမှုတစ်ခုရှိလျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထပ်မံမပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထပ်မံမွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိပါ၊ အကြောင်းမှာတစ်စုံတစ်ယောက်ပြုလုပ်နိုင်ပါကမွမ်းမံမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားရမည်ဟုအလေးအနက်ထားသည်
ငါ့မှာ iphone 5s ရှိတယ်၊ relog ကငါ့ကိုဘာမှမသိဘူး။
Relog ညနှင့်အတူရှိ၏ !!!
ဂျင်း Pierre LACOR ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ Samsung Gear S2 တွင် whatsapp ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တွင်၎င်းကို Galaxy S6တွင်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းနာရီပေါ်တွင်ကြည့်။ မရပါ။
Jean Pierre LACOR ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
pili GALERA Martinez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်က၎င်းကို iPhone6နှင့်ထပ်တူပြုပြီး watsaps ကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါ
တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်အားထပ်တူပြုထားသည်
pili မှစာပြန်ပါ GALERA MARTINEZ
လော်ရာ Martinez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Gear S2 ပေးပြီးကျွန်ုပ်မှာ iPhone 5s ရှိတယ်၊ မဖွင့်ခင် connection ဖြစ်နိုင်ချေရှိသလား။ မင်းမှာအခက်အခဲမရှိဘူးလို့ဖတ်ခဲ့တဲ့သူအများစုမှာ iPhone6... 5s နဲ့အလုပ်လုပ်ကြမလား။ ¿? ¿? ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကူညီပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Gear s2 ကို iphone 6s နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပြproblemနာမရှိပါ။ အစတွင်၎င်းကို bluetooth ဖြင့်သာဆက်သွယ်ပြီးသတိပေးချက်များကိုရရှိခဲ့သော်လည်း sasung ဂီယာနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ပန်းသီးစတိုးကနေ app ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာက အကယ်၍ သင်သည်နာရီကို Samsung နှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်၊ ၎င်းကိုမွမ်းမံပြီးစက်ရုံမှပြန်ပို့ပါက၎င်းသည် Samsung iPhone အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါကယခု WhatsApp အားမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကိုစုံစမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း